Key Terms – Migration-Innovation
Migration-Innovation > IOM Project > Key Terms
XAWAALADA CASRIGA AH: ERAYADA AASAASIGA AH
QAYBTA 1AAD: DHAQDHAQAAQA XAWAALADA
Hay’adda caalamiga ah ee Lacagta aduunka wuxuu ku qeexayaa xawilaadda in ay tahay daqliga qoyska loo soo diray ama ay siiyeen shaqsiyaad u soo haajiray meel dhaqaalo cusub leh noqdayna kuwo dagan meelahaas dhaqaalaha cusub leh. Sidaas daraadeed Xawaalada waxaa ka mid ah lacagta iiyo waxyaabaha aan lacagta ahayn ee la soo diro/laga qaato wadooyin rasmi ah ama aan rasmi ahayn.
badanaa saaxiib ama xubin qoyska ayaa lacagta u dira qaataha si uugu taageero kharashka nolosha ama kharashyada kale.
Qofka qaadana lacagta la soo diray. Macnaha buuggaan loogu qeexay qaatuhu waa qof xqaxooti ah ama qof dib ugu soo laabtay dalka.
Shirkaddaha adeegga xawaalada
Bixiyaha adeega lacagta oo sahlaya lacagaha xawaaladda ee u dhaxeeya diraha iyo qaataha. Waxay sidan ku sameeyaan dukumentiyo rasmi ah si ay u bixiyaan adeegyo xawilaad lacag oo la iskaga gudbiyo xudduuda oo ay mid yihiin bangiyada ganacsiga.
Xawaalada rasmiga ah
waxaa loola jeedaa xawaaladaha loo soo diro waddan iyada oo loo marayo wado sharci ah ayad oo loo marayo wadada sharciga ah ayada oo laga diiwaangeliyo nidaamyada maaliyadeed.
Xawilaada aan rasmiga ahayn
waxaa loola jeedaa xawaaladaha la xawilay iyada oo loo marayo waddooyinka gaarka ah ama kuwa aan la ogoleyn. Xawaaladaha noocaan ah waxay badanaa ku salaysan yihiin aaminaad waxayna ka dhacaan si ka baxsan nidaamka maaliyadeed ee la ilaaliyo.
Xawaalada Casriga ah
lacagta waxay ku diraan nidaamka qaabaysan oo elektarooniga ah. Waxay u sahlanaataa in lacag loo wareejiyo si fudud, dhaqso ah iyo in lacagta laga diri karo meelo fog. Xawaalada Casriga ah waxay taageertaa macaamiladaha sida amaano dhigashada tooska ah, Kaarta lacagta horumarkiska ah (Debit Card) iyo Kaarka lacagta deynta (Credit card), bixinta biilasha ee Online-ka ah iyo wareejinta lacagaha ee bangiyadda. ayada oo ay ku xirantahay shirkaddaha adeegga xawaalada, isticmaalida application-ka telefanka ama bogga internet-ka wuxuu si toos ah u sahlayaa in si toos ah wax loogu wareejiyo bangiyadda, Kaarta lacagta horumarkiska ah (Debit Card) iyo Kaarka lacagta deynta (Credit card).
Waa tiknoolojiyad fududeynaysa isticmaalka moobilka in ay lacag isku xawilaan dhowr xisaabood. Adeegyadda lacagta moobaylka waxay gaar ahaan bixiyaan adeegyadaan soo socda:
Xawilaada lacagaha gudaha ah iyo kuwa dibada. Xawilaadda lacagaha gudaha waxay ka koobantahay dirida/qaadashda lacagta laga qaadanayo hal meel oo ka mid ah meel gaar ah oo ku taala isla waddanka halka xawilaadda caalamiga ahi tahay mid xudduuda la iskaga gudbiyo. Bixinta moobaylka oo ka midka tahay bixinta biilasha: waxay ka koobantaa isticmaalida telefoonka moobaylka ah/ aaladda si loogu fududeeyo dhaqdhaqaaqa lacageed/ ku iibsiga badeecada/adeega la bixinayo sida korontada, kaarka hadalka, biilasha isbitaalka iwm.
Lacag bixinta baaxadda leh: lacag bixinta baaxadda waa hab degdeg ah oo loogu wareejiyo / lacag loo diro / lacag qaatayaal badan, inta badan la isticmaalo marka la bixinayo mushaharka, munaafacaadka shaqaalaha ama lacag siinta adeeg bixiyeyaasha
Lacag bixinta ganacsiga: bixinta ganacsatada jumladaha wax kuu iibiya ama kuwa sii qaybiyeyaasha kuwaas oo si baaxad leh u gata badeecada oo dib ugu qeybiya tafaariiqleyda.
“Dhaqan ahaan, kaydinta lacagta macaamiisha ee bangiga gudihiisa ugu jirta koonto lacag dulsaar leh. Waxaa mar mar kii isticmaalaa in si dabacsan loogu timaamo meel kasta loo lacag lagu keydiyo, sida haraaga lacag ku jirta keyd telefoonka gacanta oo telektoronij ah.”
“Lacag ama shay la deymiyo, badanaa oo la fahamsan yahay in amaahda dib loo bixin doono, inta badan dulsaar ay leedahay.”
Nidaamka gudbinta khatarta ah ee halka qofku u leeyahay difaac dhaqaale oo ka dhan ah qasaarada ama waxyeellada oo uu ka helo shirkadda caymiska,sida in la daboolo kharashyada caafimaadka.
“Iibsashada kaarka hadalka ee telefoonka gacanta waqtiga, badanaa laga maalgeliyo xisaabta lacagta telefoonka gacanta.”
Bixinta biilasha adeegga
“Sameynta lacag bixinta adeegga soo noqnoqonaya, oo loo sameeyo si shaqsi aahana (“fool ka fool”), ama meel fog laga sameeyo”
Sicirka sarifka waxaa lagu qeexay in uu yahay qiimaha wadan lacagtiis ay ugu dhiganto lacag kale. Sicirka sarifka ayaa loo qori karaa celceliska qiimaha mudada wakhti ah sicirka uu marayo dhamaadka mudada.
Xidhiidhka juqraafiyeed ee u dhexeeya waddan lacagta laga soo diro iyo waddanka lacagta loo diro ayaa ka koobma waddada xawaaladaha. Tusaale ahaan, ingiriiska iyo maraykan ayaa ah labada waddo ee ugu saraysa ee lacagaha usoo maraan Kenya iyo Soomaaliya markii lagu saleeyo isku celcelis xawaaladaha lacagta.
Wareejinta Bangi uu bangi kale u wareejiyo
Lacagta waxaa loo wareejin karaa laba xisaabood oo bangi ah oo laga leeyahay hal bangi (bangiga gudihiisa lagu soo wareejiyo) ama laba xisaabood oo bangi oo laga leeyahay labo bangi oo kala duwan (Wareejin u dhaxaysa labo bangi). Inta badan wareejinta lacagaha caalamiga ah waa kuwo u dhexeeya labo bangi oo kala duwan. Wareejinta Bangi-ka -Bangi waxaa lagu fududeyn karaa macaamilka xisaabiha bangiga ama “Wire Transfer” oo ah sida ugu dhaqsiyaha badan labo bangilacag iskugu dirto.
Kaarka Debit/Credit Card-ka ku socoda Keyda Moobaylka
Waxaa jira adeeg bixiyeyaal xawaaladeed kuwaas oo ogolaadaan in macaamiishoodu ay lacagta wareejin karaan ayagoo isticmaalaya Credit ama Debit Card-ka. Macaamilada waxa lagu samayn karaa koontada Bangiga ee diraha: ayadoo leh 3 ikhtiyaar i) Online-ahaan, ii) teleefanka iyo iii) adigoo booqanaya laanta.
Kaarka Debit/Credit Card-ka ku socoda Koontada Bangiga
Wareejin Xawilaadeed ayaa si toos ah looga samayn karaa Credit Card-ka oo ku socota koontada Bangiga. Tan xataa waxay leedahay saddex ikhtiyaar i) Online-ahaan, ii) Teleefoonka, iii) adoo booqda laanta. Diraha wuxuu keliyoo u baahanyahay in uu kaarka ku xiro koontada Bangiga.
Wakiil (Kaash) ku socda Wakiil kale (Kaash)
Nidaamka Macaamilka ee uu ka midka yahay booqashada wakiilka shirkadda adeega xawaalada adoo la tagaya dukukmetiyadda aqoonsiga si aad lacag ugu dirto wakiil kale ama aad ka qaadato lacag lagu soo diray wakiilka shirkadda adeegga xawaalada. Wakiiladda waa laamo iyo wakiil hoosaadyo hoos taga xaafiiska shirkadda adeega xawaalada ee weyn oo bixiya adeega macaamilka: Macaamiishu wey dhigan karaan, la bixi karaan ama wey xawili karaan.
Wakiil (Lacag) ku socota Keydka moobaylka
waxaa ka mid ah booqashada wakiilka shirakadda adeega xawalada ee kuugu dhow si shaqsi ahaan ah, buuqinta foomka ama siinta wakiilka dukumentiyadda aqoonsiga iyo nambarka telefanka qaataha. Shirkadda adeega xawaaladaha intooda badan waxay bixiyaan nambarka tixraaca uu isticmaali doono qaataha in uu kula baxo.
Keyda moobaylka oo u diraya keyd moobayl
Dirida lacagta ee si toos ah loogu diro keydka telefoonka gacanta ayadoo lacaga diraayo keyd telefoonka kale ee gacanta.
OECD waxay ku qeexaysaa sicirka sarifka in uu yahay “qiimaha ay lacag hal wadan yeelayahay ay u dhiganta lacag kale” taasi waa qiimaha hal lacag markii lala bardhigo lacag qalaad. Si dudud hadaan u sheegno waxaa lagu macnayn karaa beeca laga bixiyo lacag qalaad. Sicirka ( Qiimaha) waa aad ugu nuqul isbeddel sidaas daraadeed si joogto ah ayuu isku beddelaa.
Shirkaddaha adeegga xawaalada badankood waxay qaadaan lacag qaddar go’an ah oo ay lacagta ugu xawilaan qof lacag u diraya qof kale. Khidmaddu waxay kuxirantahay adeeg bixiyaha xawilaadaha uu qofku lacagta ka dirsanayo iyo sidoo kale lacagta la soo diro iyo lacagta lagu soo diro lacagta. Khidmaduhu qaar waxay ku xiranyihiin qaabka uu qofku lacagta u dirayo taasi oo ah in uu ka dirayo koontada Bangiga, keydla telefoonka gacanta, Debir kaarka ama credit Card-ka.
Khidmada la bixida
Khidmada laga qaado qaadashada xawaalada dibada ka timaada. Waxaa lagu oo oogaa marka ay lacagta kala baxayaan koontada Bangiga, keyda telefoonka gacanta, ATM-ka ama Wakiilka. Qarashaad la xiriira ayaa sidoo kale la geli karaa marka uu qof iibsado badeeco ama adeeg asagoo isticmaalaya debit kaar ama Credit Card-ka ama keyda telefoonka gacanta.
Khidmadda lagu soo oogo qofka amaahda/keydinta lacagta. Waxaa caadi ahaan loo muujiyaa boqolkiiba inta wadarta amaahda lagu amaahdo ama la keydsado. Tusaale ahaan, markuu qof lacag keydsado, asaga/iyada waxay heleysaa lacagta dheeri ah oo siyaado ka ah lacagtii rasumaalka ahayd. Ayadoo isla nidaamka la marayo, lacagta dib loo soo celinayo ayaa ka badan lacagta la amaahday, ayadoo lagu salaynayo sicirka dulsaarka ee lagu heshiiyey.
Migration innovation - Exploring innovations to support those affected by migration	© 2019